✍ बिप्लब पोख्रेल 1 month ago
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर एक हजार ४९७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आज ११ हजार ४४९ जनाको पिसीआर परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । योसंगै अहिलेसम्म ६९ हजार ३०१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता गौतमले बताए ।
यस्तै विगत २४ घण्टामा ४५७ जना सङ्क्रमणमुक्त भई घर फर्किएका छन् । अहिलेसम्म ५० हजार ४११ जना सङ्क्रमित निको भई घर फर्किसकेका छन् । यस्तै देशभर सक्रिय सङ्क्रमित १८ हजार ४३७ जना रहेका छन् भने क्वारन्टिनमा ६ हजार ५६५ जना रहेका छन् ।
यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ७५५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ७५५ जनामा संक्रमण देखिएको हो।
काठमाडौंका ६०९, भक्तपुरका ५१ र ललितपुरका ९५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज उपत्यकामा कोरोनाबाट ६ जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौंमा तीन पुरुषसहित चारजना, भक्तपुरमा एक महिला र एक पुरुष गरी ६ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशत उपत्यकाका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।